1. ရှမျးရိုးရာ စကားပုံမြား - စိနျထှနျး(ပခုက်ကူ)
... စကားပုံ - မနုဿကျော်ဝင်း မြွေနဂါးစကားပုံနှင့်ယုံကြည်မှုများ - ဇ၀န တိရစ္ဆာန်နှင့်ပတ်သက်သည့်စကားပုံများ - သလ္လာ-မောင်ဆွေသက် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှ သားငါးစကားပုံများ - မောင်တောက်ပြောင် ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီး၏ ...
2. သြ၀ါဒါလင်္ကာရဓမ္မကထာကျမ်း - ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
eBook file size: ebook pages: Publication: ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၂၃၇-ခုနှစ်၊ တပေါင်းလ။ ခရစ်နှစ် ၁၈၇၅-ခုနှစ်။ ရန်ကုန်မြို့။ ရတနာပုံသတင်းစာပုံနှိပ်တိုက်၌ ရိုက်နှိပ်၏။ ရွှေကျင်ဂိုဏ်းကြီးကို တည်ထောင်တော်မူခဲ့သော ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှင်ဇာဂရ ...
3. ရွှေကျင်နိကာယသမိုင်း - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
eBook file size: 3.50 MB ebook pages: 133 Publication: ခရစ်နှစ်-၂၀၁၀၊ ရွှေကျင်နိကာယ စာပေထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က ထုတ်ဝေသည်။ သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် သုတေသနနှင့်ကျမ်းပြုဌာနမှ ပုံနှိပ်၏။ Download -Related ...
4. ပေါင်းတာမှန်မှ ကောင်းတာရ - တိပိဋက ယောဆရာတော်
eBook file size: 596 KB ebook pages: 10 Publication: ယောဆရာတော်၏သင်္ကန်းသက်နှစ်(၅၀)ပြည့် ရွှေရတုအထိမ်းအမှတ်နှင့်ရွှေကျင်နိကာယ ၁၅၀ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အထူးလက်ဆောင်၊ ပထမအကြိမ်၊ ဓမ္မဒါနလက်ဆောင်စာအုပ် ဖြစ်ပါသည်။ ...
5. ရွှေကျင်သာသနာပိုင် ၀ါဆိုဆရာတော်ကြီး၏ သြ၀ါဒကထာများ
eBook file size: 449 KB ebook pages:7Publication: ၁၃၇၄-ခုနှစ်၊ ၀ါဆိုလပြည့်ကျော် (၅)ရက်။ download -Related Articles- သြ၀ါဒ ကထာများ
6. ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီး၏ ဣန္ဒြိယောဝါဒကထာ
eBook file size: 524 KB ebook pages: 17 Publication: ရွှေကျင်နိကာယစာပေထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၊ ရွှေကျင်နိကာယ ဗဟိုဌာန၊ မန္တလေးမြို့။ download ...
7. ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီး၏ သိဿကောဝါဒ စကားပုံနှင့် သြ၀ါဒကထာများ
eBook file size: 696 KB ebook pages: 29 Publication: ၁၃၄၅-ခုနှစ်၊ ရွှေဟင်္သာဆရာတော်၊ ရွှေဟင်္သာတိုက်သစ်၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး။ download